tolis.co Kpakpando Amụma May 2022 N'ihi na Ihe niile Ihe akara Zodiac
Kpakpando May 2022
Kpakpando Onye na-agụ kpakpando Nyocha @ Gba afa Isiokwu
Will ga-eji ọdịmma na nchekwube mara taa. Will ga-ahụ onye ọ bụla n'anya, ị ga-achọ inwe ntụrụndụ. Ọ bụkwa ụbọchị dị mma iji mesoo ụlọ gị mma.
Lovehụnanya: daybọchị a ga - eme ka ikwenye na ọbụnadị mmekọrịta dị obere na nsogbu nwere ike ịgba ọsọ n'otu oge. Ga-enwe ọ happyụ na ọnọdụ dị mma taa, ị ga-enwekwa ọ haveụ ma n'otu oge ahụ gosi ịdị nro gị niile.
Ọkachamara: Ọ ka mma izere ụlọ ọrụ taa ọ gwụla ma ị nwere ihe ndị mara mma! Ihe ọ bụla ọzọ na-ewere oge na-adịghị mma, nke na-esiwanye ike site na ọnụnọ gị ma na-eme ka echefu echefu gị. ... Ọzọ
O nwere ike ịbụ na ị nwere ike inwe nkụda mmụọ, nkasi obi na enweghị nchekwube. ... Ọzọ
Enwere nsogbu, nke nwere ike ịbụ ihe nzuzo. Iwe na-ewe gị nke ukwuu, gị na ndị ọzọ anaghịkwa emekọrịta ihe nke ọma.
Lovehụnanya: Enwere ike inwe nsogbu na mmekọrịta nke nwoke na nwanyị ma ọ bụ obere agụụ mmekọahụ, nke na-agaghị eduga n'ihe ọ bụla. ... Ọzọ
Mmetụta uche na-abịa n'elu ala, ọ bụchaghị n'ihi ihe mpụga. Na-achọ mmekọrịta chiri anya na nchekwa na gburugburu ma ọ bụ ezinụlọ gị.
Lovehụnanya: feel na-enwe mmetụta nke mmụọ na ụmụ nwanyị nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa na ndụ gị, n'ihi na ha ga-enyere gị aka n'ezie igosipụta ọnọdụ gị. ... Ọzọ
Nkwenye na mgbanwe na-eme ka ị nwee obi ụtọ nye ndị ọzọ. Ugbu a ị nwere ike ịme atụmatụ, nke ga-abụ nke ziri ezi.
Lovehụnanya: Taa ị ga-adọrọ mma nke ukwuu. Nwere ike inwe mmeri ma bụrụ onye a na-achụgharị ma ọ bụ na-achụ. Ọ dị mkpa na inwere ike igwu egwuregwu ahụ n’enweghị nsogbu. Erotic gị na-akpali ndị ọzọ.
Ọkachamara: Nke a bụ oge mgbe ị na-eche na ị nweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma n'ike gị dị ka ndị ọzọ yana nke a bụ n'ihi na ịchọrọ nnwere onwe. Obi ike gị ga - eme ka ndị ọzọ chọọ iso gị rụọ ọrụ. Ọ bụrụ otú ahụ, egbula oge ibute ụzọ. ... Ọzọ
Nerves ga - abụ oge maka ọgbaghara iji soro mmadụ ma ọ bụ mmadụ. Enwere ike ibuso nne gị agha, ị nweghị nkwụsi ike na mkpebi siri ike yana maka na ị gaghị amalite ihe ọhụrụ, ma ọ bụ mee nhọpụta dị mkpa, nke ịkwesịrị ịhazi, n'ihi na ikekwe ị gaghị.
Ọkachamara: Nke a abụghị ụbọchị kwesịrị itinye aka na mkparịta ụka chọrọ ọgụgụ isi. Ọnọdụ obi gị, mana ụwa nke ezi uche dị na ya, nọ n'ọgba aghara dị ukwuu. ... Ọzọ
Mmesapụ aka na ịhụnanya juru ebe niile taa. Accept na-anabata nghọta na ịhụnanya nke gburugburu ebe obibi gị, ebe gị onwe gị, na-achọ inyere ụwa niile aka ma ọfụma.
Ọkachamara: You na-eche banyere ndị ọzọ na ha na-eche ya. Oge dị mma iji soro ndị ọzọ rụọ ọrụ na ọkachasị ndị ezinụlọ gị ma mee ka ha kwenye na atụmatụ ha. Na ha ga-eme nke ọma ị nwere ike ijide n'aka na ọ ga-enwekwa mmetụta dị mma n'ahụ gị. ... Ọzọ
Ezigbo ụbọchị maka ike. Ọ na-enye gị ezi ahụ ike ma na-enye gị ahụ ike, ebe ị na-eche echiche siri ike ma nwee ike imeri nsogbu ọ bụla ị nwere. Bọchị a dị mma maka mmemme chọrọ ọbịbịa nke igwe mmadụ. Ewu ewu gị na-eto eto nke ukwuu taa.
Lovehụnanya: feel na-eche na ịdị n'otu ma nwee udo n'etiti onwe gị na nke a na-eme ka mmekọrịta gị niile ka mma, ọkachasị ndị kachasị nso. Ugbu a ị nwere ike igosipụta ihe ịchọrọ site na mmekọrịta gị, ihe na-ekpuchi gị na ihe anaghị ekpuchi.
Ọkachamara: Ọ dị gị mma na nke a pụtara ìhè n'ọrụ gị. Ezigbo oge maka kọntaktị. Mooddị mma na-akwado mkparịta ụka oge niile ma mee ka ha rụọ ọrụ. ... Ọzọ
Mmasị gị lekwasịrị anya n'ụlọ na ezinụlọ. Nne gị na-akwado gị ma na-akwado gị. ... Ọzọ
Nkwekorita uche nke egosiputara taa, n'eme gi obi uto nke uku ma nye ndi gbara gi gburugburu ezi obi. Ha na-ahụ gị dịka onye nkwuputa ma ị dị njikere ị toa ntị na ha ma nwee mmụọ nsọ inye ha ndụmọdụ ziri ezi. ... Ọzọ
Ihe omume gị na-egosipụta ụfọdụ ikwubiga okwu ókè. Enwere ibu ọrụ na mkparịta ụka banyere mmasị na nkà ihe ọmụma na ọchịchọ igosipụta ihe oyiyi nke xerola. ... Ọzọ
Amụma Kwa ụbọchị - itszọ, Maapụ, Ihu, Mbara ala, Lọ, Ihe akara Zodiac na Ọzọ
Horoscope nke omumu N'efu
Maapụ, Ihu, Mbara ala, Lọ, Ihe akara Zodiac na Ọzọ